Underwater Treadmill- Unokudzwa - Qingdao Fitmax
Underwater wekusimbisa muviri
Aqua Bike- Unokudzwa
Underwater Treadmill- Unokudzwa
The muviri furemu pamusoro pemvura wekusimbisa muviri anokudzwa chakagadzirwa 316L Stainless simbi. Chibato integrally kuumbwa uye pemvura iri electrolytically yakabwinyiswa kuwedzera kudzivisa ngura unongotaura. Inoyerera tafura inogona akapeta nokuda nyore kufamba uye nzvimbo okuponesa. Kumhanya äiti zvakanaka chete rinopfungaira mabheyaringi uye rinotipa masaja maturo.
1. divi: 1430x612x1470mm
a) Frame: Stainless simbi 316L, pakukora ndarira nenyere: 1.5mm
b) Rollers & akatakura: Stainless simbi 316L
c) Running mabhandi : zvinhu zvenaironi uye Washington City Offices
5. Surface kurapa: sokusingaitiki, Electrolytic Polish
6. Warranty: 1 gore
7. Package: Zvinhu chemarata atorwa, kaviri rukoko makadhibhokisi. Divi: 870x640x460mm, 1340x680x170mm, makatoni maviri chete yakatarwa, 54Sets / 1x20GP
The pemvura wekusimbisa muviri iri kugadzirwa nezvinhu yepamusoro Stainless simbi AISI316L uine Anti-ngura kudzivirirwa maererano dzakawanda nemitemo. Pechiso zvigadzirwa anoshandisa electrolytic pakuonekwa uye Anti kungatikanganisa unhani kuti pave mukurumari uye runako chezvinhu. Zvakanyorwa vakapakata Stainless simbi mabheyaringi uye rollers, zvinhu zvenaironi uye Washington City Offices kumhanya mabhandi runovimbisa chamazuva uye kutsiga Achimhanya.
Asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka inosunungura kumusoro uriri nzvimbo uye rollers kuti mapato nyore. Zvidikanwi vatengi siyana uye zvinopa rokunyaradza yemitambo ruzivo kuti vatengi akasiyana-siyana oushumiri.
The pemvura wekusimbisa muviri inogona kushandiswa nenzira dzakasiyana-munzvimbo dzakadai Hotels, spas, Swimming madziva, Health uye kugwinya netsvimbo, Recreation netsvimbo, Medical nzvimbo, Home, Schools, Sport zvikwata uye zvichingodaro.
Aqua kugwinya chinhu chitsva mhando Kurovedza muviri, kunoita pamwe zvose kugwinya makirasi mumvura. Aqua kugwinya anogona kusimbisa vasiri kushanda, kukurudzira ropa kuparadzirwa uye metabolic murau, Zvichakadaro kuderedza matambudziko anokonzerwa muviri. Aqua kugwinya rinoitwa pamwe siyana nenhumbi (bhasikoro, wekusimbisa muviri, elliptical anodzidzisa, etc.); ndiko kunonakidza mutambo.
The pemvura wekusimbisa muviri zvinowanisa kubatsira chaiwo kumhanya basa uye haaisi kushushikana pamusoro majoini dzenyu, kunonatsiridza muviri mwero uye kufamba kweropa. Aqua kumhanya racho terrific muchinjikwa kudzidziswa mitambo zvose uye nzira yakanakisisa kubata kana kudzivirira makuvaro. Water kumhanya kunobatsira mutambi akuvara wokugadzirisa pasina kurasikirwa kwake gym pamwero.
Zvinonzi kunyanya akaratidza kuti: uremu, Mabatirwo osteoarthritis, panyama kurapa, shure uye hudyu kukuvara, aqua kugwinya, vakwegura, chirwere rheumatic uye mumuviri kugwinya zvavo.
Anti-ngura Steel Aqua wekusimbisa muviri
Aqua wekusimbisa muviri
Fitness Swimming wekusimbisa muviri
Fitness wekusimbisa muviri Under Water
Pool wekusimbisa muviri
Sea Underwater wekusimbisa muviri
Pasi pemvura Aqua wekusimbisa muviri
Underwater wekusimbisa muviri For Sale
Walker wekusimbisa muviri
Water wekusimbisa muviri
Wedzera: No.17,Yuehe Road,Konggang IndustrialPark,Liuting,Chengyang,Qingdao